5 talaabo si ay u masixi khasnado, cookies, iyo taariikhda telefoonka Android
Telefoonada Smart waa sida kombiyuutaro iyo waxay u baahan yihiin in la dhowro waqti ka waqti. Dabcan dayactirka weeyaan hardware iyo software nidaamyada oo dhan loogu talagalay in lagu helo si kor loogu qaado nolosha ee aad telefoonka smart ah. Mid ka mid ah habka dayactirka software muhiim u tahay in sida xaqiiqada ah waxay hagaajin doontaa waxqabadka aad casriga ah waa inaan tirtiro khasnado, cookies iyo taariikhda waqti ka waqti. Waxaa jira qaar ka mid ah habka aasaasiga ah in la sameeyo laga bilaabo isticmaalaya sifooyinka android iyo browser hoose. Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda weyn ee suuqa. Waxaan burburay, kuwaas oo dhan waxaad u qodobkan hab fudud suurto gal ah. Sidaas darted, haddii aad taleefan waxaa socda gaabis ah, haatan waa wakhtigii la qaadi karto qoraal, qaar ka mid ah oo aad u ogaato sida aad karto junk oo dhan.
Clear masixi khasnado, cookies, iyo taariikhda on daalacashada kala duwan telefoonka Android
Chrome Google waa mid ka mid ah daalacashada ugu caansan dunida ma aha oo kaliya dadka isticmaala desktop laakiin sidoo kale la users android iyo sidoo. Haddii aad tahay qof aqoon leh version desktop-ka, ka dibna version android badan ama ka yar la mid yahay. Dhab ahaantii, qaababka lagama waa isku mid.
Waxaad u baahan doontaa si aad u hesho Settings ka dibna garaac Privacy .
Tallaabada xigta waa in ay ka jaftaa on Tirtir xogta
Hubi on sanduuqyada ku xiga si Cache, Browsing History, Cookies, xogta Site iyo qasabadda ku cad cad .
Firefox waa mid ka mid ah daalacashada ugu caansan dunida PC iyo waxa la helo caan ugu badan ee ay version mobile ah oo la mid ah. In badan oo ay caan ku salaysan yahay dhinacyada ay la yaab leh in design ha users caleenta iyo maareeyo dhirta fudayd. Waxaa siineya fursad si ay u maareeyaan macluumaadka gaarka ah ay si fudud. Si aad xogta:
Tubada badhanka menu aad shaashadda
Dooro Settings , ka dibna garaac Privacy iyo dooran Clear Hadda
Hubi ku saabsan dhammaan xogta aad rabto in ay nadiifiso dooro Clear Data
Opera Mini ayaa helay in ay browser ugu caansan in dadka isticmaala mobile badan mahad tayada ee riixo xogta. Waxaa jira suurtagalnimada sare in aad isticmaasho mini opera ah in aad casriga android iyo ku xiran tahay nooca aad socda nadiifinta xogta gaarka ah ee app waa mid fudud, kaliya qaadid talaabooyinka soo socda:
Fur aad mini opera oo ka jaftaa gurigaaga icon
Laga soo bilaabo liiska fursadaha, dooro on Privacy
Waxaad markaa soo xuli doona hawsha aad rabto inaad qabato ka mid ah liiska Ie Clear Kukiyada / Clear Passwords / Clear History
Top 3 History tirtirayaasha u Android
Sidaas, hadda aad leedahay ogaada farsamo sida ku saabsan sida loo nadiifiyo xogta ka browser aad jeceshahay laakiin aan u noqon lahaa wax fiican haddii aad codsi ah in sameeya hawsha idiin sameeyo? Tirtire taariikhda A ama nadiifiye waa tusaale wanaagsan oo ah codsi ah in sii fiican tahay in bixinta adeegyada nadaafadda in hubaal ka dhigi doonaa howsha fududeyso wixii user android. Helitaanka tirtire taariikhda wanaagsan wuxuu noqon karaa shaqo laakiin aan niyad jebinaysaa dambe sida aynu samaynay shaqada guriga iyo wada ururiyey ugu fiican ee kuwa suuqa. Halkan waxaan ku siin saddex ka mid ah tirtirayaasha ugu wanaagsan ee aad casriga android
App Nadiifi History Eraser-gaarka ah
Tani waa qalab ah oo uu degtay taasoo nadiifisa sarre taariikhda u android dadka isticmaala telefoonka. Waa in ka badan oo ka nadiifsan cc ah laakiin waqtigaan la joogo in domain ka android. Waa aalad lacag la'aan ah in tirtiri doonaa taariikhda iyo khasnado shiidaa kasta oo files ka telefoonka!
Waxay leedahay wax badan oo ay ka mid yihiin fursadaha nadiifinta google fursadaha nadiifinta xogta map
Waxaa laga yaabaa in laga lalmiyaa yara gaar ahaan lagu daydo phone jir
Master Nadiif ah
Si ka duwan ka app History Eraser, odayga nadiif ah waa in ka badan oo Master ah ma jiro, laakiin Jack ah oo dhan xirfadaha. Marka la eego fudud, tani waa app ah in nadiifin kartaa wixii shiidaa files laga bilaabo files junk, xogta gaarka ah si ay xogta codsiga. Sayidkiisa Nadiifi sidoo kale waa mid aad u fudud in la isticmaalo ma aha waxaan halmaamay in uu leeyahay interface qabow oo abaabul ka jabto qaababka ay aad u.
Waxay bixisaa in ka badan taariikhda nadiifinta-haddii siinayaa ammaanka fiicnayn qoreysa sidoo
Waxaa sidoo kale loogu tala galay in lagu badbaadiyo u xoogga batari
Waxaa ay maamulaan hawlaha processor
Waxa ad wax badan soo bandhigay tan iyo waa lacag la'aan
Tani waa qalab kale oo multi-functional in nadiifin kartaa ilaa app khasnado, taariikhda iyo Guda la qasabadaha fudud. Waxaa la og yahay in ay afar ka mid ka mid qalab la siiyo in uu leeyahay afar nadiifsan dhisay nadiifsan u-Default, Coobbi Cache, nadiifiye History, wac Guda Text / Coobbi.
Waxaa nadiifin kartaa kaararka SD
Waxaa maamuli kartaa codsiyada
Waxay leedahay badan oo pop up xayeysiis in ay dhacdo version xorta ah
Waxyaalaha qabow la daadiyo, kuwaas oo ay tahay in ay had iyo jeer kor u hayaa taariikhda iyo dib-u-qaybiyay si uu u xaliyo cayayaanka waqti ka waqti. Si kale haddii loo dhigo, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa sii goobaha sameeysa ee tabs waqti ka raaxaystaan ​​muuqaalada cusub oo soo afuufi doonaa maskaxdaada. Waxaa muhiim ah in ay sidoo kale isha ku hay dhinacyada ammaanka xogta taabato si ay u kor loogu qaado amniga iyo in la yareeyo fursadaha weeraro internet-ka.
> Resource > masixi > 5 Tallaabooyinka lagu masixi Cache, Cookies, iyo Taariikhda on Android Phone